Kukhuthazwa ubuntu kubafundi bakumatikuletsheni | News24
Kukhuthazwa ubuntu kubafundi bakumatikuletsheni
Abafundi bakumatikuletsheni eTshelenkosi High School banikele ngomfaniswano wabo ngemuva kokubhala izivivinyo zabo zokugcina ngoLwesihlanu oledlule. x
INHLANGANO ezimele, Izwi Lothando Home and Community-based Services, ikhuthaze usiko lobuntu kubafundi bakumatikuletsheni baseTshelenkosi High School ngoLwesihlanu oledlule ngokuthi uma beqeda ukubhala izivivinyo zabo zokugcina zebanga leshumi ngeledlule bengawudabuli umfaniswano wabo njenge njwayelo kodwa bewunikele kubafundi abahlwempu abangakafiki ebangeni leshumi.
Usihlalo wale nhlangano, uMnuz Phila Zulu uthe: “Baningi abafundi abangenawo umfaniswano, ngalesi senzo laba abanikele ngowabo bafake isandla ekuyiseni iNingizimu Africa phambili. Okunye okuhle ngalesi senzo ukuthi bazothola izibusiso kuNkulunkulu njengoba nebhayibheli lisho lithi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo,” kusho yena.
Uqhube wathi unethemba lokuthi isenzo saloluhloba singasiza ekutheni kunciphe imibhiyozo engalungile eyenziwa abafundi uma beqeda ibanga leshumi lapho abasebenzisa khona izidakamizwa ezigcine seziyingozi enkulu ezimpilweni zabo.
Uthishanhloko walesi sikole, uNks Nosipho Mpanza uthe kumangazile futhi uyaziqhenya ngalokhu okwenziwe abafundi bebanga leshumi njengoba kukhombisa ukuthi sebekhulile ngokwenqondo.
Uthe: “Abafundi bangishiye ngimangele ngoba lokhu abakwenzile kukhombisa ukuthi bayakuqonda ukubaluleka kokunikela nokubuyisela emphakathini. Njenge sikole sithanda ukudlulisa amazwi okubonga kuPhila okwaze ukuthi alekelele abafundi bethu ukuthi bekwazi ukufeza lokhu abekade behlose ukukufeza,” kusho uthishanhloko.
Uqhube wathi lokhu okwenziwe abafundi kulekelela labo abasuke bevela kwezinye izikole kodwa bengenawo amandla okuthenga umfaniswano wesikole esisha abazoqala ukufunda kusona.
Uthe: “Lokhu kwenza labo bafundi bezizwe bamukelekile esikoleni esisha okuyinto ebalulekile kumfundi ukuze ezoba nogqhozu lokufunda, yingakho siziqhenya ngabafundi bethu,” kusho Nks Mpanza.
Uqhube wathi bangama-89 abafundi bebanga leshumi abekade bethembise ukuthi bazonikela ngomfaniswano wabo kanti futhi uthe unethemba lokuthi ngonyaka ozayo lesi sibalo sizokhuphuka ukuze kuzolekelelwa abantu abaningi.
Uthe abanye babafundi abamukele umfaniswano bathembise ukuthi nabo bayonikela ngeyabo mhlazane sebeqedile ngesikole eminyakeni ezayo.
Unina woyedwa wabafundi abamukele umnikelo womfaniswano ngeledlule, uNks Makhosi Mweli, indodana yakhe ezoqala ibanga lesishiyagalombili (grade 8) khona eTshelenkosi ngonyaka ozayo, uthe uyathokoza kakhulu ngalo mnikelo njengoba ubesazozama ukutholela indodana yakhe, uNhlakanipho, umfaniswano.
Uthe: “Ngifisa sengathi uNkulunkulu engaba busisa bonke abafundi abanikele ngemfaniswano yabo. Imfundo ibaluleke kakhulu yingakho ngiwuthokozela lo mnikelo ngoba kusho ukuthi indodana yami isizokwazi ukuqhubeka neyayo imfundo,” kusho uNks Mweli.
UNks Mweli, ohlala eLindelani, uthe unezingane ezintathu kanti yena nomndeni wakhe baziphilisa ngemali yesibonelelo esivela kuhulumeni. Uqhube wathi ugqugquzele indodana yakhe ukuthi iwunakekele umfaniswano wayo ukuze nayo uma isiqeda isikole izokwazi ukunikela ngawo.